Dalka Imaaraadka: Weeraryahan dambi looga dhigay tintiisa - BBC Somali
Image caption Gyan ayaa dhawaan Koobka Qaramada Afrika ku matalayay xulkiisa Ghana
Weeraryahankii hore ee kooxda Sunderland, Asamoah Gyan, ayaa waxa uu ka mid yahay in ka badan 40 ciyaartoy oo la rumaysan yahay in "hab jarniinka timahooda aanu akhlaaq ahaan wanaagsanayn" sida uu u dhigayo xeerka Xiriirka Kubadda Cagta ee Imaaraadka Carabta ee UAEFA.
31-jirkan u dhashay dalka Ghana oo ka tirsan kooxda Shanghai SIPG ayaa haatan amaah ahaan waxa uu ugu dheelaa kooxda Al-Ahli ee ka dhisan dalka Imaaraadka Carabta.
2012-kii, goolhayaha Sucuudi Carabiya, Waliid Cabdullaahi, ayaa garsoore dhexdhexaadinayay ciyaar waxa uu ku amray inuu iska jaro tintiisa "khilaafsan nidaamka Islaamka" ka hor inta aanay dheelin kooxdiisa Al Shabaab.
Shuruucda Sucuudiga ayaa mamnuucaysa in tinta loo jaro si aan sinnayn.
Garsoorayaasha kala duwan ee ciyaaraha ayaa go'aan ka gaara in qaabka ay u jaran yihiin timaha ciyaartoyda ay sax yihiin iyo in kale, iyadoo qaar ka mid ah dadka ku nool Imaaraadka Carabta ay ka walaacsan yihiin in carruurta ay qaataan hab jarniinkaasi.
UAEFA ayaa marka hore warqad digniin ah waxa ay u diraan kooxaha ay u dheelaan ciyaartoyda, iyo weliba ciqaab gaari karta ganaax lacageed iyo ciyaaraha oo laga hakiyo haddii aanay adeecin go'aanka.
Gyan ayaa ka mid ah 46 ciyaartoy oo loo diray warqadda digniinta.